AMISOM oo billado gaar ah siisay ciidanka Uganda ee [FPU] | KEYDMEDIA ENGLISH
AMISOM oo billado gaar ah siisay ciidanka Uganda ee [FPU]
Mid kasta oo ka mid ah askartaan, wuxuu mushaar ahaan u qaadanayay bishii $1,200 halka midka Soomaaliya uu la'yahay $200.
MUQDISHO, Soomaaliya - Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya [AMISOM] ayaa billado guddoonsiiyay cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska Uganda ee loo yaqaan [FPU], kuwaas oo dib ugu laabanaya dalkooda.
In ka badan 160 askari oo ka tirsan ciidanka Uganda ee qeybta 9-aad, ayaa lagu wadaa in ay dib ugu laabtaan waddankooda, kadib markii ay dhameysteen hal sano iyo saddex bilood oo ay la shaqeynayeen AMISOM.
Billadaha la guddoonsiiyay ayaa la sheegay in ay ku muteysteen, taageerada dhiggooda Booliska Soomaaliyeed (SPF) si ay u sugaan amniga doorashada iyo qabashada hawlo ay ka mid yihiin ilaalinta xarumaha dawladda, kormeerida, ilaalinta nabadgelyada.
Taliyaha Boliska AMISOM, Kaaliyaha Kormeeraha Guud ee Boliska (AIGP) Augustine Magnus Kailie, ayaa ku bogaadiyay Ciiddanka shaqada ka tegaya, sida hufan ee ay uga qayb qaateen geeddi-socodka nabadda Somalia.
Dadka u dhuunduleela amniga, iyo howlaha AMISOM, ayaa rumeysan in ciidamada la abaal-miyay, aysan intooda badan hal xabad ka ridin qoryahooda, maadaama ay fariisimahoodu ahaayeen goobo amni ah.
Taas waxa ay ka dhigan tahay in ciidamadaan ka socda Ugandha ay qaateen sanad dalxiis ah, isla-markaana farqaha looga buuxiyay lacag badan, oo aysan waxba ku qaban.
Ciidamada Uganda, ayaa bishii Agoosto ee sanadkii hore degaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha hoose, ku xasuuqay ku dhawaad 10 ruux oo beereley ah oo aan waxba galabsan.
AMISOM ayaa tmid Soomaaliya horaantii 2007, waxaana askartii ugu horeeyay ee kasoo degay Muqdisho ahaayeen kuwa Uganda.